Iflethi okanye indlu ekwicomplex eSalento!!! - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eSalento!!!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPier Vitale
Yiza wonwabele iSalento! Iflethi yethu etofotofo isembindini weSalento kwindawo ethe cwaka nekhuselekileyo ekuthiwa yiMarittima. Indawo enkulu ekufutshane kakhulu nolwandle kunye nazo zonke iindawo zokonwaba ebusuku, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokuthenga!!!
Yiza wonwabele iSalento; eyona ndawo intle neyaziwayo yabakhenkethi kwisithende saseItali! Iflethi yethu etofotofo isembindini weSalento kwindawo ethe cwaka nekhuselekileyo ekuthiwa yiMarittima. Icocekile, itofotofo ibe inomtsalane xa ulwandle lubona kakuhle. Ukukhanya kwemvelo okumnandi kuyo yonke le ndawo. Indawo enkulu yokusebenzela, yokupheka neyokuphumla. Indawo entle ekufutshane kakhulu nolwandle kwaye uhamba ngeenyawo/uhamba ngemoto ukuya kuzo zonke iindawo zokonwaba ebusuku, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokuthenga.
I-TERRACE: Kukho ityeya enkulu ejongene nolwandle kunye negadi encinci eqoqoshiweyo enomthi womnquma kunye neentyatyambo. Eyona ndawo intle yendlu ngokuqinisekileyo ingaphandle! Kukho izitulo, iitafile zokutyela, isofa kunye neambrela yaselwandle elinde ukuba uphumle. Kukho ishawa phandle ukuba ufuna ukuhlamba emva kosuku elwandle nendawo yokoja yokupheka intlanzi nenyama. Ithala ligcwele ukukhanya, libonakala kakuhle. Iindwendwe ezininzi ziyakuthanda ukuba nesidlo sangokuhlwa ngaphandle xa kutshona ilanga, zibuka iinkwenkwezi ebusuku zize zonwabele indawo epholileyo.
IKHITSHI: IKHITSHI linefriji, i-deep freezer, iikhabhathi nomatshini wokwenza ikofu. Iipani, izinto zokupheka, iiglasi, nento yokuvula ibhotile nazo ziyafumaneka ukuze uzisebenzise. Nceda ulungele ukubonelela ngokutya kwakho, iziselo, iimveliso zakho kunye nezinye izinto osenokuzidinga ukuze uhlale kamnandi. Ikofu encinci, i-jam, isonka kunye nobisi ziyafumaneka kwiintsuku ezimbalwa zokuqala.
AMAGUMBI OKULALA: Kukho amagumbi okulala amabini – elinye linebhedi enkulu ibe elinye lineebhedi ezimbini ezincinci. Amashiti acocekileyo aza kuba ebhedini xa ufika. Iitawuli ezicocekileyo ziza kuba segumbini lakho. Kuza kubakho iingubo ezongezelelekileyo, amashiti acocekileyo neetawuli kwindawo yokubeka impahla xa uzidinga. Kufakwe umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu ukuze uwusebenzise.
IGUMBI LOKUHLAMBELA: Kukho igumbi lokuhlambela elipheleleyo elineshawa (akukho bhafu). Iitawuli ezicocekileyo, iphepha langasese nesepha zonke ziqukiwe.
IINDAWO EZISECALENI KOLWANDLE: Le ndawo intle nyhani xa unxweme lolwandle olukufutshane nendlu. Le ndlu ikwindawo entle yokubuka iSalento nezinye iindawo ezininzi ezikumgama wemizuzu eyi-40 xa uhamba ngemoto. Unokutyelela i-Acquaviva di Marittima (imizuzu eyi-3 ngemoto), i-Castro (imizuzu eyi-5 ngemoto), i-Gallipoli (imizuzu eyi-7 ngemoto), i-Santa Maria di Leuca (imizuzu eyi-20 ngemoto), i-Santa Cesarea (imizuzu eyi-5 ngemoto), i-Otranto (imizuzu eyi-30 ngemoto), i-Gallipoli (imizuzu eyi-40 ngemoto), i-Lecce (imizuzu eyi-40 ngemoto) kunye nezinye iindawo ezininzi. Ndicebisa iOtranto, iLecce, iSanta Maria di Leuca e Gallipoli; zintle kakhulu entwasahlobo!
INDAWO YOKUPAKA: Kukho indawo yokupaka esimahla esetyenziswa ngumntu wonke phantsi kwendlu ibe kulula ukuyifumana.
IIVENKILE ZOKUTYELA/IIVENKILE/IIMARIKE: Kule minyaka sifumene iivenkile zokutyela/iibhari ezimbalwa ezithandwa zindwendwe zethu kule ngingqi. Ukuba ufuna indawo entle yokutya okanye isiselo sicebisa ukuba ube ne-pizzerias, iivenkile zokutyela, iibhari, ikofu, okanye iivenkile zokutyela ezifikelelekayo zokutya kwaselwandle okanye ukutya kwase-Pugliese. Ngaba unomdla wokuthenga ukutya? Iimarike zethu zasekuhlaleni ziimayile eziyi-1 ngemoto (kwisixeko saseMarittima) kwaye zinemveliso esandul 'ukuvunwa, inyama, itshizi, isonka kunye neziselo.
IZITHUTHI ZIKAWONKE-WONKE: Ngelishwa, akukho nkqubo yezithuthi zikawonke-wonke esebenza kakuhle okanye elungiswe kakuhle kumzantsi weItali. Ngoko ke, sicebisa ukuba uqeshise ngemoto ukuze ukwazi ukuhambahamba. Ebudeni beenyanga zehlobo, kukho ibhasi yokukhenketha ebizwa ngokuba "yiSalento kwiBhasi" eza kukusa kuyo yonke iSalento. Indawo yokumisa ibhasi ikude ngeemitha eziyi-100 kuphela kwaye siza kukunika incwadana enamaxabiso okuma kunye namatikiti. Iiteksi zinqabile kwaye i-Uber ayikho semthethweni.
INDAWO YOKUHLAMBA IMPAHLA: Akukho ndawo yokuhlamba iimpahla kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex. Kukho iingubo ezimbalwa, amashiti neetawuli ezicocekileyo kwindawo yokubeka impahla xa uzidinga okanye ungacela ezinye. Indawo yokuhlamba iimpahla zikawonke-wonke yimayile eyi-1 ngemoto kwaye ipholile kwaye iyafikeleleka.
I-WIFI: Akukho WIFI ikonekta kwizindlu ezikufutshane nolwandle, kodwa ungakhangela kwi-intanethi ngefowuni yakho (i-intanethi okanye i-intanethi) okanye i-intanethi ye-intanethi nge-laptop yakho.
Ukubhalisa XA UFIKA nokuphuma: Siza kuthumela imiyalelo eneenkcukacha ZOKUBHALISA XA KUFIKWA/ZOKUPHUMA kuzo zonke iindwendwe ngaphambi kokuba zifike. Ukubhalisa xa ufika kudla ngokuba semva ko-11 kusasa uze uphume emva ko-9/10 emva kwemini.
Ndisebenza eBoston, kodwa xa ufika abazali bam baza kukuvuyela ukukwamkela nokukuzisa eflethini. Abazali bam bahlala kwimayile eyi-1 ukusuka kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex kwaye baza kufumaneka xa unemibuzo okanye iingxaki onokuba nazo ngexesha leholide yakho.
Ndiyathemba ukuba unayo inkcazelo oyidingayo. Zive ukhululekile ukundifowunela okanye undithumelele i-imeyile ngayo nayiphi na inkcazelo, imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo. Kuya kuba mnandi ukukwamkela kwaye ndiyathemba ukuba ungachitha iholide ethe cwaka eSalento. Hlala kamnandi!!!
uPier (Iwebhusayithi efihlwe nguAirbnb)
(Iwebhusayithi ifihlwe ngu-Airbnb)
Umbuki zindwendwe ngu- Pier Vitale
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Andrano